चियाको सौखिन मानिस हुन्छन् बढि क्रिएटिभ ! | Hamro Doctor News
चियाको सौखिन मानिस हुन्छन् बढि क्रिएटिभ !
चियको सौखिन हुने मानिसले कुनै पनि मौका गुमाउन चाहदैनन् चिया पिउनबाट । साथीसँग गफ गर्न होस वा कामबाट ब्रेक लिने, चिया पिउने मानिसले कुनै न कुनै बहाना चिया पिउने खोजि रहन्छन् । अब चिया पिउने मानिसका लागि अब एउटा अझ मौका मिलेको छ चिया खाने । पेर्किङ्ग यूनिभर्सिटीले दावी गर्दै चिया पिउने मानिसको ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता बढि हुन्छ र उनको क्रिएटिभिटी चिया नखाने मानिसको भन्दा बढि हुने गरेको बताएको छ ।
चिया पिउनाले केन्द्रिकृत गर्ने क्षमता कसरी बढ्छ ?
चियामा भएको कैफीन र थियनाइनले अलर्टनेस बढाउने काम गर्छ । एक अध्ययनका अनुसार मस्तिष्कको फुर्तिपना बढेको महसुस गर्न सक्छन् । मनोवैज्ञानिकहरुले ५० जनाको टोली जसको उमेर औसतमा २३ वर्ष थियो । तीनिमाथि अध्ययन गरेको थियो । ती मध्ये आधी जति मानिसलाई पिउनका लागि पानी दिइयो भने आधी मानिसलाई कालो चिया पिउनका लागि दिइयो ।
फूड क्वालिटी एन्ड प्रिफरेन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार दिनमा चिया पिउनाले क्रिएटिभिटीको स्तर बढेर जान्छ । चिया जस्ता पेय पदार्थतले मानिसको संज्ञानात्मक क्षमतामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने यस अध्ययनबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
उसो अध्ययनमा यो पनि भनिएको छ की कुनैपनि चिजको अत्यधिक सेवनले नोक्सान पनि हुन सक्छ र यो चियामाथि पनि लागु हुन्छ । त्यस कारण चियाको पनि उचित मात्रामा सेवन गर्नु राम्रो हुन्छ ।
Last modified on 2019-02-07 11:32:39